कप्तान पारस खड्का घाइते, मलेसियाविरुद्धको खेल भोलि - Everest Dainik - News from Nepal
कप्तान पारस खड्का घाइते, मलेसियाविरुद्धको खेल भोलि
काठमाडौं, साउन ७ । आईसीसी टि–२० विश्वकप एसिया छनोट प्रतियोगिता अन्तर्गत कतार विरुद्धको खेलमा नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्का घाइते भएका छन् । उनमा ढाडको समस्या देखिएको छ । ढाडमा समस्या आएपछि कप्तान खड्का दोस्रो इनिङ्समा मैदान उत्रिएका थिएनन् । उनमा देखिएकाे ढाडको समस्या कति गम्भीर हो भन्नेबारे सार्वजनिक भइसकको छैन ।
याे पनि पढ्नुस त्रिकोणात्मक सिरिजः नेपाली टिममा पारस र ज्ञानेन्द्रले ओपनिङ गर्ने
कतारसँग लज्जास्पद हारका ५ मुख्य कारण, अबको सम्भावना के छ?
यदि भोलि मलेसियाविरुद्धको खेलमा पनि पारसमा यो समस्या कायमै रहे नेपाललाई थप समस्या पर्ने देखिन्छ । पारसको ढाडमा समस्या देखिएपछि दोस्रो इनिङमा उनको स्थानमा अलराउण्डर पवन शरार्फ मैदान प्रवेश गरेका थिए । आज पारसले २८ रन बनाए । उनी र ज्ञानेन्द्र मल्लबीच पहिलो विकेटकाका लागि ४९ रनको साझेदारी भएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस भुटानविरुद्ध पारसले लिए लगातार २ विकेट!
यो साझेदारी टि–२० क्रिकेटमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो साझेदारी हो । यसका बाबजुत अन्य ब्याट्सम्यानको खराब प्रदर्शनका कारण कतारविरुद्ध नेपाल ४ विकेटले पारजित हुनपुग्यो ।विश्वकप छनोट खेल्ने सम्भावना कायमै राख्न नेपालले बाँकी सबै खेल जित्नै पर्ने दबाब छ ।
ट्याग्स: टि–२० विश्वकप, पारस खड्का